Liiska Koorsada ee Tonka Online | Tonka Online | Dugsiyada Dadweynaha Minnetonka
Tonka Online wuxuu bixiyaa koorsooyinka hoos ku qoran. Guji cinwaanka koorsada hoose si aad u aqriso faahfaahin gaar ah. Xusuusnow muddada koorso kasta la bixinayo, maaddaama qaarkood la heli karo sannadka oo dhan kuwa kalena ay yihiin oo keliya xilliga xagaaga.
Fadlan ogow in dabeecadda dheeriga ah ee Tonka Online awgeed, koorsooyinku ay socdaan haddii ay buuxiyaan shuruudaha diiwaangelinta. Haddii aad su'aalo ka qabtid koorsooyinka sugaya, fadlan la xiriir Macallinka Hoggaamiya Tonka Online.
Liisaska Koorsada Daabacan
Koorsooyinka Tonka Online (PDF)
Koorsooyinka Xagaaga ee Tonka Online (PDF)
Si aad koorsooyinka ugu kala shaandhayso heerka fasalka, fadlan ku qor fasalkaaga (Fasalka 9aad, Fasalka 10aad, Fasalka 11aad, Fasalka 12aad) baarka baaritaanka ee kor ku yaal oo guji "raadinta."
Koorsada Wax Barashada Jirka
Koorsada Luqadda Saxeexa
Fayo-qabka Fayoqabka Fasalka B
Koorsada Luuqada Aduunka
Tirakoobka AP ee la Dardargeliyay (Tonka Online)
Koorso: # T4104 *, Tonka Online **
Shuruudaha looga baahan yahay: Si guul leh u dhammaystiray koorsadii hore ee AP ama IB.
Koorsadani waxay baraysaa 10-ka mawduuc ee tirakoobka hal xilli-dugsiyeed la dedejiyay moodada. Waxaa loogu talagalay in lagu daro isku xigxiga xisaabta caadiga ah ee 4ta sano ah waxaana kaliya lagu bixiyaa fasalka amaahda 0.5.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Dardargelinta Tirakoobka AP (Tonka Online)
Koorso: # 6100
Xulashada khadka tooska ah: # T6100, Tonka Online
Xisaabinta waa koorso ganacsi oo lama huraan u ah ardayda qorsheyneysa inay ku bartaan ganacsiga kuleejka taas oo ardayda u soo bandhigta mabaadi'da aasaasiga ah iyo nidaamka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Xisaabinta I
Muusikada caanka ah ee Mareykanka (Tonka Online)
Koorso: # T6699 *, Tonka Online
Shuruud: Xiisaha muusikada
Muusikada caanka ah ee Mareykanka waa koorso hal-xilliyeed oo loogu talagalay ardayda jecel inay baaraan taariikhda muusikada caanka ah ee Mareykanka laga bilaabo horraantii qarnigii 19-aad ilaa maanta.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan muusikada caanka ah ee Mareykanka (Tonka Online)
Luqadda Dhagoolayaasha Mareykanka I
Koorso: # 5000, S1
Koorso: # 5002, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T5000 *, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T5002 *, Tonka Online
Ardayda koorsadan waxaa lagu baraa Luqadda Dhagoolayaasha Mareykanka iyo dhaqanka Dhagoolayaasha, iyagoo diiradda saaraya calaamadaha badanaa la isticmaalo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Luqadda Dhagoolayaasha Mareykanka I
Luqadda Calaamadaha ee Mareykanka II
Koorso: # 5004, S1
Koorso: # 5006, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T5004 *, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T5006 *, Tonka Online
Shuruudaha: ASL I
Ardaydu waxay balaariyaan ereyadooda calaamadaha, naxwaha, iyo dhaqanka dhagoolayaasha iyagoo adeegsanaya muuqaalka wajiga haboon iyo dhaqdhaqaaqa jirka ee lagu baray heerka I.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Luqadda Dhagoolayaasha Mareykanka II
Mabaadi'da Sayniska Kombiyuutarka ee AP
Koorso: # AP654, S1
Koorso: # AP656, S2
Xulashada khadka tooska ah : # T6500F, qeybta 1, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah : # T6502W, qeybta 2, Tonka Online
Khadka tooska ah, dhammaystir qaybta 1 kahor qaybta 2
Koorsadan sidoo kale waxaa lagu qaadan karaa VANTAGE # V500 (mid dooro)
Shuruudaha looga baahan yahay: C ama kaga fiican Aljabra; Hordhaca Sayniska Kombuyuutarka waa lagula talinayaa laakiin looma baahna
Mabaadi'da Sayniska Kombiyuutarka waxay ardayda u soo bandhigtaa fikradaha aasaasiga ah ee sayniska kombiyuutarka waxayna ku xujeysaa inay sahamiyaan sida xisaabinta iyo teknolojiyaddu u saameyn karaan adduunka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan mabaadi'da sayniska kombiyuutarka AP
Sayniska Deegaanka AP (Tonka Online)
Koorso: # T3100 *, qaybta 1, Tonka Online
* Xulo ereyga F = dhicid
Koorso: # T3102 *, qaybta 2, Tonka Online
* Xulo ereyga W = jiilaalka
Koorsadan sidoo kale waxaa lagu qaadan karaa VANTAGE # V300 (dooro mid kaliya)
Shuruudaha: Kimistariga, Sayniska Jirka
Kani waa koorso maadooyin kaladuwan ah oo loogu talagalay ardayda xiiseysa bii'ada dabiiciga ah ee adduunka iyo arrimaha laxiriira.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP cilmiga deegaanka (Tonka Online)
Afka AP iyo Qaab dhismeedka 12
Koorso: # AP104
Xulashada khadka tooska ah: # T1100 *, Tonka Online
* Xulo ereyga F = dayrta, W = jiilaalka
Heerarka: 0.5 (koorso semester-dheer ah)
Shuruudaha looga baahan yahay: Ingiriis kasta oo 11 Koorso ah
Koorsadan, ardaydu waxay akhriyaan oo baaraan tiraab badan oo tiraab ah oo aan qoraal ahayn oo ay ka mid yihiin qormooyin, waraaqo, khudbado, sawirro, farriimo warbaahineed, xusuus-qorro, iyo taariikh-nololeedyo ka kala socda qoraayo kala duwan iyo duruufaha taariikhiga ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Language iyo Curiska 12
Koorso: # T3104W, Tonka Online
Heerarka: .5 (Semester guga oo kaliya)
Shuruudaha looga baahan yahay: Dhammaystiray ama si isku mid ah uga diiwaangashan labadaba AP Physics 1 iyo koorso kalkulas.
Tani semester-dheer Tonka Online Dabcan waxaa loogu talagalay ardayda hore u qaaday AP Physics 1 iyo rabto in aad qaadato Physics AP ee C: imtixaanka farsamo.
Koorsadani waxay ku saabsan tahay mowduucyada makaanikada leh muraayadaha kalkulas ee qaab iswaji ah / qaab macallin lagu hago. Mawduucyadani waa kuwa loo yaqaan 'Kinematics', Sharciyada Newton, Shaqada / Tamarta / Awoodda, Dareenka, Wareegga, iyo Oscillations.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Physics C-Mechanics (Tonka Online)
Koorso: # AP400, S1
Koorso: # AP402, S2
Xulashada khadka tooska ah : # T4100 * qeybta 1, Tonka Online
* Xulo xilli S = xagaaga, F = dayr, W = jiilaal
Xulashada khadka tooska ah : # T4102 * qeybta 2, Tonka Online
Koorsadan sidoo kale waxaa loo qaadan karaa iyada oo qayb ka ah VANTAGE # V100 (mid dooro) *
Shuruudaha looga baahan yahay: dhammaystirka guusha (B- ama ka sii wanaagsan) ee Daraasaadka Xisaabta, Shaqooyinka, Xogta & Trig, Precalculus ama talobixinta macallinka
Koorsadani waa daraasad heer jaamacadeed ah oo ku saabsan mawduucyada tirakoobka ee naqshadaynta tijaabada, falanqaynta xogta, iyo hababka loo tixraacayo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan AP Statistics
Koorso: # 3044, S1
Koorso: # 3046, S2
Xulashada khadka tooska ah : # T3044 *, qeybta 1, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah : # T3046 *, qeybta 2, Tonka Online
Shuruudaha looga baahan yahay: Sayniska Jirka, Kimistariga
Koorsadani waa daraasad ku saabsan cilmiga bayoolajiga, iyadoo xoogga la saarayo mowduucyada bayoolajiga ee heerka gacanta iyo molikula.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Biology
Qaab dhismeedka Kulliyadda 12 (Tonka Online)
Koorso: # T1042 *, Tonka Online
Koorsadani waxay xoojineysaa qorista qaabab kala duwan oo khibrad-darro ah si looga caawiyo ardayda inay u diyaargaroobaan guusha kulliyadda iyo goobaha kale ee dugsiga sare kadib.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Curiska loogu talagalay Kulliyadda 12 (Tonka Online)
Koorso: # 1026, S1
Koorso: # 1028, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T1026F, qeyb 1 , Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T1028W, qeybta 2, Tonka Online
Khadka tooska ah: Buuxi qeybta 1 kahor qeybta 2
Shuruudaha looga baahan yahay: Ingiriis kasta 10 Koorso
Laga soo bilaabo buugaagta sawirada illaa filim ilaa suugaanta caadiga ah, ardaydu waxay diiradda saari doonaan kaalinta shaqsi ee bulshada. Qoraalka ardayda waxaa ku jiri doona qormooyin dhaqameed, iyo waliba qaybo hal abuur leh iyo sahamin.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Ingiriisiga 11
Ingiriis 12 FALL (sidoo kale xagaaga Tonka Online)
Koorso: # 1030, S1
Xulashada khadka tooska ah: # T1030 *, Tonka Online
Heerarka: .5 (hal semester)
Koorsadani waxay ka caawineysaa ardayda inay horumariyaan xirfadaha akhriska, qorista, ku hadalka, iyo daawashada iyo inay tixgeliyaan sida mawduucyada muhiimka ah ee suugaanta caadiga ah iyo kuwa casriga ahi ugu xirmaan safarkooda.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Ingiriisiga 12 FALL (sidoo kale xagaaga Tonka Online)
Ingiriis 12 Jiilaal
Ikhtiyaar la Doortay ama Loo Baahan Yahay
Koorso: # 1032
Koorso: # T1032W, Tonka Online
Koorsadan sahankan waxaa loogu talagalay inay isbarbar dhigto qaab dhismeedka English 12 FALL iyadoo la adeegsanayo qalab kala duwan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Ingiriisiga 12 Jiilaal
Excel iyo Tirakoobka Biology (Tonka Online)
Koorso: # T3099 *, Tonka Online
Ardaydu waxay ku tababbari doonaan falanqaynta garaafka iyo tirakoobka ee bayoolajiga si ay ugu diyaar garoobaan qeybta sheybaarka ee koorsooyinka bayoolajiga MHS.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Excel iyo Istaatistikada Bayoolajiga (Tonka Online)
Jimicsiga A (Tonka Online)
Koorso: # T6798 *, Tonka Online
Shuruudaha: Ma jiro. Khidmadaha ayaa la dalbadaa xagaaga.
Fitness-ka khadka tooska ah wuxuu fursad u siiyaa ardayda inay ku fidiyaan waxbarashadooda agagaaraha isboorti uu dugsigu kafaalo qaado ama dhaqdhaqaaqa jimicsiga nolosha inta ka baxsan dugsiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Fitness A (Tonka Online)
Koorso: # 5200, S1
Koorso: # 5202, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T5200 *, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T5202 *, Tonka Online
Faransiiska 1, ardaydu waxay xiriir la sameyn doonaan noloshooda iyo wax soo saarka, dhaqamada, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Faransiiska iyagoo adeegsanaya daraasad mowduucyo kala duwan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Faransiiska I
Maamuusta Faransiiska II
Koorso: # 5220, S1
Koorso: # 5222, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T5424F, qeybta 1, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T5426W, qeybta 2, Tonka Online
Khadka tooska ah, dhammaystir qaybta 1 kahor qaybta 2.
Shuruudaha: Faransiiska I
Maamuusta Faransiiska II, ardaydu waxay xiriir la sameyn doonaan noloshooda iyo wax soo saarka, ku dhaqanka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Faransiiska iyagoo adeegsanaya daraasado mowduucyo kala duwan ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sharafta Faransiiska II
Faransiis III Maamuus
Koorso: # 5224, S1
Koorso: # 5226, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T5208 *, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T5210 *, Tonka Online
Shuruudaha looga baahan yahay: Faransiis II Maamuus ama Faransiis II oo ogolaansho ka haysta macallin
In French III Honors, ardaydu waxay xiriir la sameyn doonaan noloshooda iyo wax soo saarka, dhaqamada, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Faransiiska iyagoo adeegsanaya daraasad mowduucyo kala duwan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan sharafka Faransiiska III
Hawlaha, Tirakoobka & Trigonometry
Koorso: # 4028, S1
Koorso: # 4030, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T4028 * qeybta 1, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T4030 * qeybta 2, Tonka Online
Shuruudaha looga baahan yahay: Si guul leh ugu dhammaaday Aljabra Sare
Buundo udhaxeysa High Algebra iyo Precalculus, waxay ku dhisan tahay aasaaska aljebra waxayna sii diyaarineysaa ardayda Precalculus ama Statistics.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Waxqabadyada, Tirakoobka & Trigonometry
Aasaaska Neuroscience (Tonka Online) - CUSUB 2021-22
Koorso: # T3023
Xulashada sayniska ee ku saleysan caddaynta waxaa loogu talagalay ardayda xiisaha u leh inay fahmaan sida maskaxda bini'aadamka u shaqeyso ee la xiriirta garashada, xusuusta, iyo barashada. Koorsadani waxay sahmin doontaa mawduucyadan iyada oo loo marayo isku xidhka neerfaha iyo sidoo kale sida molikiyuullada bayoolojiga iyo geeddi-socodka ay u xakameynayaan jirka aadanaha oo dhan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Aasaaska Neuroscience (Tonka Online) - CUSUB 2021-22
Koorso: # 4012, S1
Koorso: # 4014, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T4012 * qaybta 1, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T4014 * qeybta 2, Tonka Online
Shuruudaha looga baahan yahay: # 3006 Guul dhammaystiran oo ah Aljabra laba jibaaran ama Aljebra fasalka 8aad
Koorsadani waxay ka kooban tahay dhammaan mawduucyada joomatari ee ay ka hadlayaan heerarka xisaabta gobolka Minnesota iyo isku xidhka aljebrada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan joomatari
Koorso: # 4020, S1
Koorso: # 4022, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T4020 *, qeybta 1, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T4022 *, qeybta 2, Tonka Online
Shuruudaha looga baahan yahay: dhammaystirka guusha ee Quadratic Algebra & Joometri ama talo soo jeedinta macallinka
Koorsadan waxaa ku jira mowduucyo looga hadlay heerarka xisaabta ee Minnesota ee koorsada Algebra ee sanadka labaad dhaqameed.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Aljebrada Sare
Maamuusta Aljebra Sare
Koorso: # 4024, S1
Koorso: # 4026, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T4024 * qeybta 1, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T4026 * qeybta 2, Tonka Online
Shuruudaha: B ama ka fiican joomatari ahaan ama talo bixinta macallinka
Koorsadan waxaa ku jira mowduucyo looga hadlay heerarka xisaabta ee Minnesota ee koorsada Algebra ee sanadka labaad, iyo mowduucyo dheeri ah oo loogu diyaarinayo ardayda Precalculus.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maamuusta Aljebra Sare
Habdhiska Bini'aadamka iyo Jirka. 1
Koorso: # 3020
Xulashada khadka tooska ah: # T3020, Tonka Online
Koorsadan sidoo kale waxaa lagu mari karaa VANTAGE # V200 (mid dooro)
Shuruudaha: Sayniska Jirka ama Sayniska Jirka Maamuusta, Kimistariga
Koorso loogu talagalay ardayda xiiseyneysa sida jidhka bini'aadamka u shaqeeyo, oo ay ku jiraan anatomy (qaabdhismeedka jirka) iyo jir ahaaneed (shaqooyinka jirka).
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan habdhiska jirka iyo jir ahaanshaha 1
Koorso: # 6312
Xulashada khadka tooska ah: # T6312, Tonka Online
Baro istaraatiijiyado ku-meel-gaadh ah oo loogu gudbo nolosha dugsiga sare kadib. Baadh aagagga maareynta lacagta, caymiska, guryaha, xirfad-yaqaannimada, iyo xirfadaha wareysiga shaqada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Nolosha Madaxbanaan
Hordhaca Cilmiga Kombiyuutarka
Koorso: # 6500
Xulashada Khadka tooska ah: # T6599S, xagaaga oo keliya, Tonka Online
Heerarka .5 (koorsada semester)
Shuruudaha looga baahan yahay: C ama kaga fiican Aljabra
Hordhaca Sayniska Kombiyuutarka wuxuu awood u siinayaa ardayda inay abuuraan farshaxanno sax ah oo ay ku lug yeeshaan sayniska kombiyuutarka oo ah dhexdhexaad u ah hal-abuurka, isgaarsiinta, xalinta dhibaatooyinka, iyo madadaalo.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Hordhaca Sayniska Kombiyuutarka
Horudhaca barnaamijka horumarinta ee Swift (Tonka Online)
Koorso: # T6512 *, Tonka Online
Koorsadani waxay kaa caawineysaa inaad aasaas u sameyso barnaamijyada aasaasiga ah iyadoo la adeegsanayo Swift luqad ahaan. Waxaad khibrad uheli doontaa aaladaha, farsamooyinka, iyo fikradaha loo baahan yahay si loo dhiso barnaamij aasaasi ah iOS ah.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Intro to App Development oo leh Swift (Tonka Online)
Caafimaadka yar, Tonka Online
Fasalka Lagu Bixiyay : fasalka 11, xagaaga oo keliya
Heerarka : 0.125
Shuruudaha looga baahan yahay: Waa inuu ahaadaa arday ka diiwaangashan VANTAGE, PSEO, ama koorsooyin aan heer hoose ahayn oo loogu talagalay 2 ka mid ah 3 fasal ee muhiimka ah (sayniska, taariikhda, Ingiriisiga). Fadlan arag la-taliyahaaga kahor intaadan is qorin.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Caafimaadka Yaryar, Tonka Online
Xiriirka Shakhsi iyo Qoys
Koorsada : # 6318
Xulashada khadka tooska ah: T6318, Tonka Online
Fasalada (yada) la bixiyay : fasalka 11, fasalka 12
Heerarka : .5 (koorsada semester)
Shuruudaha : Ma jiro
In la horumariyo xirfadaha iyo aqoonta dhinacyada xiriirka dadka iyo nolosha qoyska. U diyaari xeelado iyo xirfado aad ku ilaaliso kuna kobciso xiriiro caafimaad qaba noloshaada.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Xiriirka Shakhsi iyo Qoys
Koorso: # 3028, S1
Koorso: # 3030, S2
Xulashada khadka tooska ah : # T3028 *, qeybta 1, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah : # T3030 *, qeybta 2, Tonka Online
Shuruudaha: Sayniska Jirka ama Sayniska Jirka
Codsiyada wax ku oolka ah waxaa loo isticmaalaa in lagu baaro mowduucyada indhaha, dhaqdhaqaaqa mowjadaha, makaanikada, tamarta, iyo korantada.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Fiisigiska
Biology pre-AP (Tonka Online)
Koorso: # T7204S, xagaaga oo keliya
Fasalada (yada) la bixiyo: 10-11
Heerarka: .5 (xagaaga)
Koorsadani waxay dhameystireysaa .5 dhanka amaahda doorashada.
Shuruudaha: Ardayda waa in laga diiwaan geliyaa AP Biology deyrta; koorso ikhtiyaari ah xagaaga kahor.
Ardayda koorsadan xagaaga waxay dhameystiri doonaan barashada internetka waxayna ku mashquulsan yihiin nashaadaadyo waxbarasho si ay ugu diyaar garoobaan qalafsanaanta iyo xawaaraha Meelaynta Horukacsan (AP) Biology.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Pre-AP Biology (Tonka Online)
Xisaabinta Kahor AP (Tonka Online)
Koorso: # T7206S, xagaaga oo keliya, Tonka Online
Shuruudaha: Dhameystirka Precalculus
Koorso khadka xagaaga ah oo nus-amaah ah ayaa diiradda lagu saaray barashada xirfadaha xisaabinta hordhaca ah iyo fikradaha.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Pre-AP Calculus (Tonka Online)
Kimistariga Pre-AP (Tonka Online)
Koorso: # T7202S, xagaaga oo keliya, Tonka Online
Heerarka: .5 (xagaaga oo kaliya)
Shuruudaha: Ardayda waa in laga diiwaan geliyaa AP Chemistry deyrta; koorso ikhtiyaari ah xagaaga kahor.
Koorsadan waxaa ka mid ah xirfadaha kimistariga ee aasaasiga ah waxaana ka mid ah taageerada AP Chemistry xagaaga lagu meeleeyo. Hadafka guud waa in la helo waddo loogu talagalay ardayda mustaqbalka AP Chemistry si loo adkeeyo aasaaska kiimikada adag markay u gudbaan shaqada koorsada heerka kuleejka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Pre-AP Chemistry (Tonka Online)
Koorso: # T7208S, xagaaga oo keliya, Tonka Online
Shuruudaha looga baahan yahay: Dhammaystirka guusha Aljebrada Sare ama Maamuusta Aljebra Sare
Koorso khadka xagaaga ah oo nus-amaah ah ayaa diiradda lagu saaray dib-u-eegista xirfadaha falanqaynta tirakoobka iyadoo loo diyaargaroobayo koorsada AP Statistics.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Pre-AP Statistics: Functions, Statistics & Trigonometry (Tonka Online)
Koorso: # 4032, S1
Koorso: # 4034, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T4032 * qeybta 1, Tonka Online
* Xulo ereyga F = dayrta, W = jiilaalka,, S = Xagaaga
Xulashada khadka tooska ah: # T4034 * qeybta 2, Tonka Online
Shuruudaha looga baahan yahay: A- ama kaga wanaagsan Aljebrada Sare ama B- ama ka sii sarreeya Maamuusta Algebra Sare ama FST
Koorsadani waa daraasad horumarsan oo ku saabsan shaqooyinka, garaafyada, iyo trigonometry ee loogu talagalay in loogu diyaariyo ardayda barashada Calculus.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Precalculus
Koorso: # 4036, S1
Koorso: # 4038, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T4036 *, qeybta 1, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T4038 *, qeybta 2, Tonka Online
Shuruudaha looga baahan yahay: A ee Aljebrada Sare ama B + ama ka sii sarreeya Maamuusta Aljebra Sare
Daraasad heer sare ah oo ku saabsan shaqooyinka, garaafyada, iyo trigonometry oo ay weheliyaan mowduucyo xisaab saafi ah oo dheeraad ah oo ay ka mid yihiin: induction, vectors, taxane, parametric, and polar coordinates.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Maamuusta Precalculus
Koorso: # T7210S, xagaaga oo keliya, Tonka Online
Koorso xagaaga nus-amaah ah oo ardayda loogu diyaarinayo precalculus ka dib markay dhammeeyaan aljebrada sare.
Akhriso inbadan oo kusaabsan Precalculus Prep: Functions, Statistics & Trigonometry (Tonka Online)
Aljabra laba jibbaaran
Koorso: # 4004, S1
Koorso: # 4006, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T4004 * qeybta 1, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T4006 * qeybta 2, Tonka Online
Shuruudaha looga baahan yahay: C ama kaga fiican Aljebra ee Khadadka
Koorsadani waxay u dhigantaa koorsada Algebra ee sanadka koowaad oo lagu daray culeys dheeri ah oo ku saabsan xiriirada laba jibbaaran.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Aljebra Quadratic
Koorso: # 5400, S1
Koorso: # 5402, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T5400 *, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T5402 *, Tonka Online
Isbaanishka I, ardaydu waxay xiriir la sameyn doonaan noloshooda iyo wax soo saarka, ku dhaqanka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Isbaanishka
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Isbaanishka I
Maamuusta Isbaanishka II
Koorso: # 5420, S1
Koorso: # 5422, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T5420F, qeybta 1, Tonka Online
Xulashada khadka tooska ah: # T5422W, qeybta 2, Tonka Online
Shuruudaha: Isbaanishka I
In Isbaanishka II Maamuusta, ardaydu waxay xiriir la samayn doonaan noloshooda iyo wax soo saarka, ku dhaqanka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Isbaanishka iyagoo u maraya daraasado mowduucyo kala duwan.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Isbaanishka II Maamuusta
Isbaanishka III Maamuus
Koorso: # 5424, S1
Koorso: # 5426, S2
Shuruudaha: Isbaanishka II Maamuusta
In Isbaanishka III Maamuusta, ardaydu waxay xiriir la samayn doonaan noloshooda iyo wax soo saarka, dhaqanka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Isbaanishka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Isbaanishka III Maamuusta
Koorso: # 5416, S1
Koorso: # 5418, S2
Xulashada khadka tooska ah: # T5416F, qeybta 1
Xulashada khadka tooska ah: # T5418W, qeybta 2
* Khadka tooska ah, buuxi qeybta 1 kahor qeybta 2
Shuruudaha: Isbaanishka IV ama Isbaanishka IV Maamuusta
Isbaanishka V, ardaydu waxay xiriir la sameyn doonaan noloshooda iyo wax soo saarka, ku dhaqanka, iyo aragtida dhaqamada ku hadla Isbaanishka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Isbaanishka V
Naqshadeynta Ciyaaraha Fiidyowga
Koorso: # 6508
Xulashada khadka tooska ah: # T6508
Koorsadan ku saleysan mashruucan, ardaydu waxay horumarin doonaan cayaaraha kombiyuutarka ee shaqeynaya iyagoo isticmaalaya Dhismo 2. Ardayda waxaa lagu barayaa mabaadi'da aasaasiga ah ee naqshadeynta ciyaarta iyo horumarka.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Naqshadeynta Ciyaaraha Fiidyowga
Koorso: # 6506
Xulashada khadka tooska ah: # T6506
Naqshadeynta Websaydhku waa hal-semester, manhaj ku saleysan mashruuc oo baraya xirfadaha isgaarsiinta dhijitaalka ah iyadoo loo marayo qaab-dhismeedka websaydh xirfadeed iyo geeddi-socodka horumarinta.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Naqshadeynta Webka
Barnaamijka Fayoqabka B (Tonka Online)
Koorso: # T6799 *, Tonka Online
Shuruudaha looga baahan yahay: Hal Fitness Koorso. Khidmadaha ayaa la dalbadaa xagaaga.
Fayo-qabka tooska ah ee 'Online Wellness' wuxuu ardayda u abuuraa fursad ay ku ballaadhiyaan waxbarashadooda ku saabsan isboorti uu dugsigu maal-galiyo ama firfircoonaanta jir-dhiska nolosha inta ka baxsan dugsiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Barnaamijka Fayoobaanta B (Tonka Online)
Koorso: # 6706
Xulashada khadka tooska ah: # T6706
Fasalada (s) la bixiyo: 9- 12
Koorsadani waxay dhammaystireysaa .5 xagga amaahda Waxbarashada Jimicsiga.
Xoog saarida Yoga Fit waxay kuxirantahay jimicsiga dabacsanaanta iyadoo lagu darayo wadnaha, awooda, iyo fikradaha isboortiga.
Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Yoga Fit A